प्रहरीहरुले हरेक दिन श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्ने! - Sidha News
प्रहरीहरुले हरेक दिन श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्ने!
बोगटी अहिले हरेक सामेलमा सोध्छन्- शतप्रतिशत प्रहरीले श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्छु भनेर हात उठाउँछन्। घरकी श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नु नभन्नुले प्रहरी कार्यालयको काममा के अर्थ राख्छ?प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले विस्तृत अर्थ्याउन खोजे। बोगटीका अनुसार हरेक मानिसको दैनिकी सर्वप्रथम घरकै माहोलबाट चलिरहेको हुन्छ। घरको वातावरणले कार्यालयको काममा सिधै असर गर्छ।
अझ चौबिसै घन्टा ड्युटीमा खटिने प्रहरी कर्मचारीका लागि त झन् घरायसी वातावरणको असर महत्वपूर्ण नै छ। किनकि, प्रहरी सडक, चोक, बजार, कार्यालय जता पनि जनतासँग खटिरहेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूको दिमाग जतिबेलै ताजा हुनुपर्छ। ‘त्यो हुनका लागि घरायसी वातावरण ठीक हुनुपर्छ,’ बोगटी भन्छन्।
बोगटीले एउटा घटना स्मरण गरे। घटना स्वयम्भू वृत्तको हो। बोगटी महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौंमा थिए।
गत जेठमा एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षकले आफ्नै पे’स्तोलले कञ्चटमा हानेर आ’त्मह’त्या गरे। त्यसको कारण पारिवारिक तनाव थियो।
ती असईसँग शान्ति मिसनका क्रममा बोगटीले हाइटीमा सँगै काम गरेका थिए। ‘त्यस्तो इमानदार र लगनशील प्रहरीले आ’त्महत्या गर्नुपर्ने कारण गहिरिएर हेर्दा आवेश, तनाव र पारिवारिक कलह देखियो,’ बोगटीले भने। अहिले पनि फौजी संगठनमा आ’त्मह’त्याका घटना छँदैछन्। प्रहरीसाथै नेपाली सेनाका जवानले कहिलेकाहीँ आफूले बोकेको ह’तियार चलाएर आ’त्महत्या गरिरहेका छन्। यस्ता घटना पारिवारिक बेमेल र झगडाको कारण निम्तिएको बोगटीको बुझाइ छ। कतिपय फौजी संगठनका कर्मचारी परिवारमा तनाव हुँदा डिप्रेसनको सिकार भइरहेका छन्।
उनीहरू ड्युटी सकेपछि मदिरा सेवन गर्ने, बढी उत्तेजनामा आउने र अप्रिय कदम चाल्ने गर्छन्। स्याङजा प्रहरी प्रमुख भएर पुगेपछि बोगटीले यस्ता घटना सम्झे र आफ्ना प्रहरी कर्मचारीको घरायसी वातावरण बनाउन अभियान नै चलाउने निष्कर्षमा पुगे। बोगटी अपराध अनुसन्धानमा दख्खल राख्ने प्रहरी अधिकृत हुन्। उनले पारिवारिक कलहका कारण घटेका थप्रै घटनाको अनुसन्धान गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘मानिसको सबैभन्दा ठूलो कुरा पहिले परिवार ठीक हुनुपर्छ, परिवार ठीक भयो भने हरेक काममा त्यसले सकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ।’
‘घरासयी वातावरण राम्रो भयो भने उच्च कार्यसम्पादन हुन्छ, तनाव व्यवस्थापन पनि हुने भयो,’ बोगटीले भने, ‘त्यसैले, मैले हरेक दिन हरेक प्रहरी कर्मचारीले श्रीमतीसाथै छोराछोरीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्न लगाएँ।’ बोगटीले आफू गएपछि स्याङजा प्रहरीमा यो अभियान थालेका थिए। अहिले हरेक प्रहरी कर्मचारीले आफ्नी श्रीमतीलाई बेलुका ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्छ। प्रहरी कर्मचारीले श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्छन्/भन्दैनन् भनी जाँचबुझ गर्न प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीलाई फोकल पर्सन नै तोकिएको छ। उनले हरेक प्रहरीका श्रीमती र छोराछोरीको नम्बर राखेका छन्।
उनले दिनहुँ ‘फलोअप’ गरिरहेका हुन्छन्। भने-नभनेको, कार्यालयबाट बिदा लिएर घर पुगे नपुगेको, घरमा पुगेपछि कस्तो वातावरण भयो लगायत अनेकथरी गतिविधिबारे अधिकारीले घरमा सोध्छन्। ‘एक त यो चाहिँ मेरो ड्युटी नै हो भन्ने पनि परेको छ, अर्को परिवारमा नयाँ खालको उत्साह पनि आएको छ,’ बोगटी भन्छन्। सुरू-सुरूमा श्रीमानले ‘आइ लभ यू’ भन्दा श्रीमतीहरूले जिस्क्याएको जस्तो ठानेछन्। पछिपछि चाहिँ श्रीमानले माया गर्न थाल्यो भनेर खुसी हुन थालेको बोगटीले बताए।
कार्यालयमा उनले फ्री वाइफाइ राखेका छन्। प्रहरी कर्मचारीहरूले घरमा सधैं मेसेन्जर, भाइबर, इमो, ह्वाट्स एप लगायतबाट सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन्। ‘दिनहुँ, घर टाढा छ भने पनि श्रीमान् मसँग नजिक छ भन्ने श्रीमतीले पनि अनुभूति गर्न पाइन्,’ बोगटीले भने। समाजमा अनेक विकृति छन्। श्रीमानको माया नपाएपछि बिरक्तिएर श्रीमतीले घरबार लथालिंग पारेका घटना पनि छन्। ‘श्रीमानले माया गर्न छोड्दा श्रीमतीले अर्कैको माया पाउने र त्यसले परिवारमा झन् समस्या पैदा गर्ने हुन्छ,’ बोगटीले भने।
बोगटीका अनुसार आ’त्मह’त्या बढी हुने जिल्लामा स्याङ्जा पाँच नम्बरमा छ। यहाँ बिहे भएको दुई महिनामै श्रीमती-श्रीमानबीच झगडा भएर आ’त्मह’त्या निम्तिएका घटना छन्। ‘मैले प्रहरीबाट यो अभियान सुरू गर्दा समाजमा पनि सकारात्मक सन्देश गई आ’त्मह’त्या नियन्त्रण होस्,’ बोगटीले भने, ‘समाजको सुरक्षा गर्ने प्रहरीबाट यो सन्देश फैलिन जरुरी छ।’ प्रहरीमा बिदा नपाएको, घर जान नपाएको गुनासो व्याप्त छन्। तिनले पनि कार्यसम्पादनमा असर गरिरहेको बोगटीले बताए। अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले बिदाको सन्दर्भलाई लिएर आउने गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन नै दिएका छन्।
घर र गाडी किन्न अबदेखि बैकंले ८.३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने
विश्व बैंक र एडीबीबाट सरकारले १४ अर्ब ऋण लिने
साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छः नेता नेपाल
कैलाली भन्सारबाट चार महिनामै सवा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको खाद्यान्न आयात
९ कक्षाकी पढ्ने एक किशोरीलाई ८ जनाले १३ दिनसम्म बला’त्कार